आज विश्व हाँसो दिवस ! हास्नु होस र स्वास्थका यति धेरै फाईदाहरु उठाउनुहोस ! – Public Health Concern(PHC)
भारतको मुम्बईका डाक्टर मदन कटारियाको पहलमा सन् १९९८ देखि मे महिनाको पहिलो आइतबार विश्व हाँसो दिवस मनाउन थालिएको हाे ।
उहाँकाे पहलमा हाँसोमा आधारित योगामार्फत हाँसो दिवसका रुपमा मनाउन सुरु गर्नुभएको हो । हाँसोका माध्यमबाट विश्व शान्तिमा सकारात्मक योगदान र भ्रातृत्व तथा मित्रताको विश्वव्यापी चेतना फैलाउन यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।
हाँसोले शारीरिक र मानसिक तनाव हटाउन मद्धत गर्नुका साथै प्रतिरोधी क्षमता बढाउन पनि सहयोग पुर्‍याउने योग विज्ञको भनाइ छ ।
हाँसोले तनावका हार्मोनलाई घटाई स्वस्थ रहने रसायन बढाउनुको साथै मुटुको रक्षा गर्न सघाउने तथा दैनिक १० देखि १५ मिनेटसम्म हाँस्नाले तौल घटाउन पनि सहयोग पुग्ने विज्ञहरुको भनाई छ ।
😆आउनुस हासौ र स्वास्थ्यका यति धेरै फाईदा उठाऔ :
साँचो मुस्कानले तपाईंलाई अझ मनपर्दो, आकर्षक, बुद्धिमानी र भरपर्दो बनाउन सक्छ। के तपाईंलाई थाहा छ प्राय: मुस्कुराई रहने मानिसहरु बिना स्वास्थ्य सुधार लामो जीवन बिताउने गर्दछन !
1.मूडमा सुधार हुने
सन 2010 मा गरिएको एक अध्ययनले मुस्कुराउँदा हाम्रो मूडलाई सुधार गर्न र सकारात्मक विचारहरू बढाउन मद्दत गर्ने कुरा पत्ता लगायो । अध्ययनले भनेको छ मुस्कुराउदै बिहानीको सुरुवात गर्नेहरुको दिन चर्या राम्रो हुनेछ !
2. रक्तचाप कम गर्न सहयोग गर्ने
मुस्कुराउँदा र हास्दा तपाईंको रक्तचापलाई कम गर्न मद्दत पुर्याउँछ, जुन तपाईंको मुटु स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो। साथै हास्ने मानिसहरुमा हृदय रोगको विकासको जोखिम पनि कम हुने गर्दछ।
3. तनाव बाट राहत
मनोवैज्ञानिक विज्ञानको एक जर्नलमा प्रकाशित 2015 को अध्ययनले मुस्कुराई रहने मानिसहरुमा तनावको दर कम हुन सक्ने कुरा औलाएको छ । तनाव सामान्यतया हृदय र रक्तचापमा वृद्धि हुन्छ। जब तपाईं मुकुराउनु हुन्छ तब मानसिक साथै शारीरिक रुपमा स्फुर्ती बड्ने गर्दछ !
4. राम्रो सम्बन्ध
के तपाईंले ध्यान दिनुभएको छ, तपाईंले धेरै मानिसलाई आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ ? 2014 मा गरिएको एक अध्ययन अनुसार, मुस्कान गर्ने व्यक्तिहरू मुस्कुराउने व्यक्ति भन्दा बढी मनपर्दो देखिने गर्दछ्न । मुकुराउने मानिसहरु सुन्दर देखिनुका साथै राम्रो सम्बन्ध पनि भएका हुन्छ्न , जुन तपाइँको समग्र स्वास्थ्य र भलाइको लागि महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंको अनुहारमा छाएको मुस्कानले बलियो, स्वस्थ सामाजिक सम्बन्ध कायम गर्न मद्दत गर्दछ।
5. बलियो प्रतिरक्षा प्रकार्य
विश्वास गर्नुहोस , हँसिलो (जुन प्रायः एक मुस्कानको साथमा हुन्छ) तपाईंको शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली बढाउन मद्दत पुर्याउँछ। 2015 को अध्ययनले हँसिलो उपचारले महिलाहरूमा प्रतिरक्षा प्रणाली बढाएको देखाएको छ, जसले बच्चाहरू मात्र पाउँछ। त्यसोभए, हासो साँच्चै राम्रो औषधि हो।
6. दर्दमा राहत
2012 मा एक अध्ययनले हासोले सामाजिक दुखाइको सीमा बढाउने कुरा देखाएको छ, हासोले उच्च दुखाइमा सहिष्णुता सिर्जना गर्दछ। यदि तपाईं चोटमा हुनुहुन्छ भने, बिरामि वा पुरानो रोग बाट ग्रसित हुनुहुन्छ भने , हास्य चलचित्र हेर्ने, कमेडी शोमा उपस्थित गर्नुहोस्।
7. लामो जीवन
एक 2010 को अध्ययनले मुस्कुराएको र सकारात्मक भावनाहरू भएका मानिसहरु लामो जीवन बाच्न सक्ने तथ्यांकले देखाएको छ !
जनस्वास्थ्य सरोकारका लागि तिर्थराज आचार्यले तयार गर्नु भएको !
Tags: better to know in healthhealth infohealthy life